China T shirt milina fanaovana milina fanaovan-tserasera | Taile
1.Ny fanaraha-maso nomerika nomerika dia azo ovaina hatramin'ny 999 segondra. Ny milina fanontam-pirinty dia misy koa fandrefesana mari-pana niomerika manomboka amin'ny 32-455 F. Ny fikajiana ny bokotra "SET" mandritra ny fotoana fohy dia afaka mamadika an'i Fahrenheit.ary Celsius temparature mandroso sy miverina
2.Ny tànana misokatra sy akaiky akaiky dia mora ampiasaina ary azo ovaina amin'ny bokotra fanerena any aorian'ny milina. Ny tanjaky ny indostria sy ny faharetany dia mamela ho an'ny fampiasana maharitra, manao izany ho fampiasam-bola lehibe misy lanjany miavaka amin'ireo mpifaninana aminy.
PRESS 3.FANAFANA MAFANA - 110 V 1200 W, mafana hatramin'ny hafanana haingana ary ao anatin'ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra taorian'ny famohana azy dia miankina amin'ny mari-pana nofidinao. Tehina hafanana avo lenta, fitarihana hafanana mahomby.
4.Teflon mifono platen hafanana sy ny fanoherana ny hafanana amin'ny silika dia ataovy milina fanaovana pirinty t-shirt tsara indrindra, azonao antoka ny valiny madio. Azafady, aza manahy sao ho simba amin'ny ranomainty ny fitafianao. Tsy hilatsaka ny ranomainty rehefa mamindra ilay masinina ianao. Miaraka amin'ny platen mifono Teflon, tsy mila mividy takelaka Teflon intsony ianao, manangona vola, mitahiry ezaka.
5. PRESS HEAT SUBLIMATION HEAT PRESS- mahazaka takelaka hafanana 15 × 15, faritra midadasika amin'ny sehatry ny asa hahafahanao mamoaka vokatra betsaka. Lanja mavesatra: 48,5 lbs, lozisialy fanamafisam-peo matevina matevina manokana, manome antoka ny tsindry mety sy milamina.
6.MULTIFUNCTIONAL SY Mora ampiasana: ny press press dia azo ampiasaina amin'ny T-shirt, kitapo, tsihy totozy, sora-baventy, lamba firakotra, sns.
7.Fanaperana nomerika fifehezana ireo masontsivana roa ireo. Halavan'ny mari-pana: 32 ka hatramin'ny 455 degre F, Faritra elanelam-potoana 0 ka hatramin'ny 999 segondra, ny fotoana elektronika sy ny fifehezana ny hafanana, ny fotoana marina napetraka.
8.Easy ny miasa misokatra sy akaiky mafy tahony miaraka amin'ny lohataona manampy; Ny tanan-tanana ergonomika dia mampitombo ny fampiononana sy famokarana;
9. Ny fahitana nomerika nomerika sy ny mari-pana dia ny prefeta mpanampy mandritra ny asanao.
15 * 15 santimetatra
Teo aloha: Masinina fanaovana gazety hafanana Protale
Manaraka: Masinina fanontana hafanana vaovao miisa 5 amin'ny 1
Hafatra fanaovan-gazety ho an'ny T Shirt
Masinina Press Press
T Shirt Machine Press Press
T-milina fanaovan-gazety T Shirt